जनकपुरमा बेवारिसे अवस्थामा शिशु, कस्ती निष्ठुरी अामा होलिन? शेयर गराैं – PathivaraOnline
Home > समाचार > जनकपुरमा बेवारिसे अवस्थामा शिशु, कस्ती निष्ठुरी अामा होलिन? शेयर गराैं
जनकपुरमा बेवारिसे अवस्थामा शिशु, कस्ती निष्ठुरी अामा होलिन? शेयर गराैं
admin December 5, 2018 समाचार 0
जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियान चलाइरहेको बेला जनकपुर बेवारिसे शिशु फेला परेको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका ७ स्थित जानकी नगरको पतंजली योग साधना केन्द्रको उत्तरमा रहेको झ्याङमा मंगलबार साँझ अन्दाजी ४/५ दिनको शिशु फेला परेको हो।
स्थानीयले चिच्याइरहेको अवस्थामा बच्चा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले उनको उद्धार गरेर हाल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराएको छ।
झ्याङमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको शिशुको उपचार भइरहेको र हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिए। अनैतिक सम्बन्धबाट छोरी जन्मेपछि फालेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ।
अत्यन्तै दुखद खबर : पैसाकोअभावमा गर्भवती महिलाको मृत्यु – पढेर सबैले शेयर गरीदिनुहोला
बुढीगंगामा भीषण बाढी : पुल बगायो, बस्ती पनि यस्तो जोखिममा (तस्विरहरूमै हेर्नुस्)
पिताले छोरालाई पशुजस्तै डोरीले बाँधेर घिसारे, हेर्नुहोस् भाइरल भिडियो
लकडाउनमा चम्कियो भाग्य, रातारात बने अर्बपति